ကမ္ဘာရေးရာ - Yawnathan News
by Hla Soewai - 01 Jul 2022 07:53 AM
ယခုအခါ ဒီမိုကရက် ပါတီ အဖို့ ၂၀၂၄ သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲတွင် လက်ရှိ သမ္မတ ဂျိုး ဘိုင်ဒင် နှင့် ဒုသမ္မတ ကင်မလာ ဟာရစ် တို့ထက် ပို၍ ကောင်းမွန်သည့် သမ္မတလောင်းကို ရှာဖွေနိုင်မှသာလျှင် နိုင်ဖွယ် ရှိတော့သည် ဆိုသည်ကို ရိပ်စားမိလာကြပြီဖြစ်သည်။ အောက်လွှတ်တော် ဇန...
ဂျိုး ဘိုင်ဒင် ၏ အာရှ ခရီးစဉ်
by Hla Soewai - 24 May 2022 07:18 AM
တရုတ်သမ္မတ ရှီကျင့်ပင်သည် ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီ လ အတွင်း နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံ ကို လာရောက်ခဲ့ပြီးနောက် ယခု အချိန်အထိ ပြည်ပ ခရီးစဉ် တခါဖူးမျှ ထွက်ခဲ့ဖူးခြင်း မရှိသော်လည်း အမေရိကန် သမ္မတ ဂျိုး ဘိုင်ဒင် သည်ကတော့ မ...
ယူကရိန်း စစ်ပွဲကြောင့် ဘူမိနိုင်ငံရေး အနေအထားသည် အနောက်မှ အရှေ့သို့ တက်သုတ်ရိုက် ရွေ့လျားလာဖွယ်ရှိ
by Hla Soewai - 18 May 2022 11:40 AM
မိမိရန်သူ၏ ရန်သူမှာ မိမိ မိတ်ဆွေ ဆိုသော စကား မှန်သည် ဆိုလျှင် မိမိ မိတ်‌ဆွေ၏ ရန်သူ ကိုကော မိမိ ရန်သူ အဖြစ် သဘောထားရမည်လော၊ ထိုသို့ မဖြစ်မနေ သဘောထားဖို့ကတော့ မလိုအပ်ပေ။ လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေသော ရုရှား-ယူကရိန်း စစ်ပွဲ အပေါ် တရုတ် တို့က ထိုသို့ ယူဆနေ...
မားကိုစ် သား က သမ္မတ၊ ဒူတာတေး သမီးက ဒုသမ္မတ
by Hla Soewai - 11 May 2022 11:40 AM
ဖခင်ဖြစ်သူ ဖာဒီနန် မားကိုစ် နောက်ဆုံး ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သော ရွေးကောက်ပွဲ သည်ကား ၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် ဖြစ်သည်ကို သတိရကြဦးမည် ဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်က သူ့အား အတိုက်အခံ လုပ်ကာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သော ကိုရာဇွန် အကွီနို အား ထောက်ခံသူများ အဝါရောင် ဝတ်စုံများ ဝတ်ဆင်ပြီး ...
ပူတင် နျုလက်နက် သုံးနိုင်ခြေ ရှိမရှိ
by Hla Soewai - 30 Apr 2022 11:59 AM
ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စု ပြိုလဲခဲ့ရမှု ကြောင့် ကမ္ဘာအလယ်တွင် အကြီးအကျယ် အရှက်ရခဲ့ရသည့် ရုရှား၏ သိက္ခာကို အဖတ်ဆယ်ရန် နှင့် ယခင်ကကဲ့သို့ အင်အားကြီး နိုင်ငံ ဖြစ်နေဆဲ ‌ဆိုသည်ကို ကမ္ဘာအား ပြသနိုင်ရန် ဗလာဒီမာ ပူတင် အတွက် အားကိုးစရာ ဟူ၍ ခေတ်သစ် ရုရှား တပ်မတော်က...
ပြည်ပ‌ ကြွေးမြီ မဆပ်နိုင်တော့သော သီရိလင်္ကာ
by Hla Soewai - 17 Apr 2022 11:28 AM
သီရိလင်္ကာသည် ၁၉၄၈ တွင် ဗြိတိသျှ တို့ထံမှလွတ်လပ်ရေး ရပြီးချိန်မှစ၍ နှစ်ပေါင်း သုံးဆယ်နီးပါး ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပြည်တွင်းစစ်ကြီး ကြားမှအခက်အခဲ အကြပ်အတည်း ပေါင်း မျိုးစုံ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသော နိုင်ငံ တနိုင်ငံ လည်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် တခါဖူးမျှ ပြည်ပကြွေးမြီကို မဆပ်နို...
အဘယ်ကြောင့် ရုရှား ဗိုလ်ချုပ် အများအပြား ကျဆုံးခဲ့ရသနည်း
by Hla Soewai - 16 Apr 2022 10:58 AM
ယူကရိန်းအား ရုရှားတပ်များ ဝင်ရောက် ကျူးကျော်ပြီး လေးရက်မြောက်နေ့တွင် ရုရှား အမှတ် (၄၉) ကြည်းရေလေ တပ်ပေါင်းစု ၏ တပ်မှုး ‌ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ယာကော့ ရာဇန်ဆက်ဗ် က ထိုးစစ်ကြီး ပြီးဆုံးလုနီးပြီဟု သူ၏ တပ်များကို အာမခံ ပြောကြားလာခဲ့သည်။ သို့သော် တလအ...
အာဏာရှင်များ နှင့် ကခုန်ခြင်း
by Hla Soewai - 04 Apr 2022 10:55 AM
လက်ရှိ အော်တိုကရေစီ နှင့် ဒီမိုကရေစီ အကြား ရုန်းကန် တွန်းထိုးနေမှုကြီးသည် ကျွန်တော်တို့ ခေတ်ကို ပြဋ္ဌာန်းပေးလာတော့မည့် စိန်ခေါ်မှုကြီးပင် ဖြစ်သည်ဟု ဂျိုးဘိုင်ဒင်မှ အွန်လိုင်း ဒီမိုကရေစီ ထိပ်သီး အစည်းအဝေး တွင် ပြောသွားခဲ့သည်က သွေးထွက်အောင်ပင် မှန်လာပြီ ဖြစ...
by Hla Soewai - 23 Mar 2022 11:06 AM
ရုရှား-ယူကရိန်း စစ်ပွဲသည် ဒုတိယ လ ထဲ ဝင်ရောက်လာသည်နှင့် အမျှ အီးယူ၏ စွမ်းဆောင်မှုများ စစ်ပွဲ ဖြစ်စထက် လျော့နည်း ကျဆင်းစ ပြုလာနေပြီကို ပြီးခဲ့သည့် ဆယ်ရက်အတွင်း တွေ့မြင်လာနေရသည်ဟု ယူကရိန်း နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဒီမီထရို ကူလီဗာ မှ ပြောလာခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ ...
ကမ္ဘာရေနံဈေးကွက်ကြီး သွက်သွက်ခါ လှုပ်ရမ်း ခဲ့ရသည့် အကြောင်းရင်း များ
by Hla Soewai - 09 Mar 2022 10:28 AM
မတ်လ ၆ ရက်နေ့တွင် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး အန်တိုနီ ဘလင်ကင်မှ မိမိတို့ သည် ရုရှားရေနံများကို အတူ လက်တွဲပြီး တညီတညွတ်တည်း ပိတ်ဆို့သွားရန် ဥရောပ မဟာမိတ်များ နှင့် ဆွေးနေးနေပြီဟု မမျှော်လင့်ပဲ ထုတ်ဖေါ် ကြေညာလိုက်မှု နှင့် အတူ ကမ္ဘာရေနံ ဈေးကွက်ကြီး သွက...
What is No-Fly Zone?
by Hla Soewai - 06 Mar 2022 12:55 PM
ဗလာ‌ဒီမာ ပူတင်၏ တပ်များ ကီယက် မြို့တော်အနီး တရွေ့ရွေ့ ချည်းကပ်လာနေပြီး ရုရှား ဒုံးကျည်များသည်လည်း ယူကရိန်း မြို့တော်များသို့ တဖွဲဖွဲ ကျရောက်လာနေချိန်တွင် သမ္မတ ဇယ်လင်စကီး မှ ယူကရိန်း နိုင်ငံပေါ်တွင် လေယာဉ် မပျံသန်းရ ဇုံ သတ်မှတ်ပေးရန် နေတိုး အဖွဲ့ကြီး...
ရုရှား ကျုးကျော်မှု အပေါ် တရုတ်၏ သဘောထား
by Hla Soewai - 03 Mar 2022 11:21 AM
၁၉၆၈ ခုနှစ် တွင် ဆိုဗီယက်တို့ ချက်ကိုစလိုဗက်ကီယား ကို ကျူးကျော်ခဲ့ကြစဉ်က တရုတ်ပြည်ကို အုပ်ချုပ်နေကြသော စိတ်မာခက်ထန်သည့် တော်လှန်ရေး သမားကြီးများက စက်ဆုပ်ဖွယ် ရာဇဝတ်မှုကြီး အဖြစ် ကျယ်လောင်စွာ ပြောဆိုရှုတ်ချခဲ့ကြသော်လည်း ၎င်းတို့ အနေနှင့် အံ့အားတသင့် တော့ မ...
ဗလာဒီမာ ပူတင်၏ အမှား သုံးရပ်
by Hla Soewai - 01 Mar 2022 12:04 PM
ရုရှားတို့ ယူကရိန်းအား ကျုးကျော် ခဲ့မှုသည် စီစဉ်ထားသည့် အတိုင်း ဖြစ်မလာခဲ့ပေ၊ ယူကရိန်း၏ ဒုတိယ အကြီးဆုံး မြို့တော် ဖြစ်သော ကာကစ်ဗ်အား ရုရှားတို့ တိုက်ခိုက်လာမှု ကို ယူကရိန်းတို့ တွန်းလှန်နိုင်ခဲ့ပုံ ရသည်။ တောင်ပိုင်းတွင် ဗလာဒီမာ ပူတင်၏ တပ်များက နယ်မြေများက...
ထင်တိုင်း မပေါက် ဖြစ်လာနေသော ရုရှား
by Hla Soewai - 27 Feb 2022 11:32 AM
ရုရှားတို့၏ ယူကရိန်း ကျုးကျော်စစ်သည် ကြာသပတေးနေ့ အာရုံတက်ချိန်တွင် စတင်လာခဲ့သည့် အချိန်က လျပ်တပြက်ထိုးစစ်ပုံစံမျိုး ဆင်နွှဲလာနိုင်သည်ဟု အားလုံးက မျှော်လင့်ထားခဲ့ကြသည်။ သို့‌ သော် ရုရှားတို့ဖက်က အင်အားအလုံးအရင်း နှင့် ကြိုတင်တပ်ဖြန့် ချ စီမံထားခဲ...
ယူကရိန်း အကျပ်အတည်းတွင် အဓိက ကျလာသည့် ဒွန်းနက်စ် နှင့် လူဟန့် ‌ခွဲထွက်မှု
by Hla Soewai - 23 Feb 2022 02:44 PM
ရုရှားသည် အဆိုပါ ဒေသနှစ်ခု မှ တ‌ဖက်သတ်လွတ်လပ်ရေး ကြေညာလာမှု ကို အသိအမှတ် ပြုလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။ ယင်းနှင့် အတူ ယူကရိန်း ပတ်ပတ်လည် တွင် တပ်ဖြန့်ချထားသော အင်အား ၁၉၀,၀၀၀ အထိ ရှိလာနေပြီ ဖြစ်သည့် ရုရှား တပ်များကလည်း ဝင်ရောက် ကျူးကျော်ရန် အသင့်အနေအထား ...
ပူတင်သည် ယူကရိန်းကို ကျုးကျော်သည် ဖြစ်စေ မကျုးကျော်ခဲ့သည် ဖြစ်စေ ရုရှား အဖို့ ထိခိုက် နစ်နာသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်
by Hla Soewai - 22 Feb 2022 12:26 PM
ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၉ ရက်နေ့ထုတ် အီကော်နော်မစ် မဂ္ဂဇင်း၏ အယ်ဒီတာ အာဘော်မှ အထက်ပါ ခေါင်းစဉ် ဖြင့် ယခုလို ရေးသား ဖေါ်ပြလာခဲ့သည်။ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ပူတင်သည် ကြိုတင် ဇာတ်တိုက်ထားသည့် အတိုင်း ရုပ်မြင်သံကြား ရှေ့သို့ ထွက်လာပြီး ၎င်း၏ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး၏...
ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်များ ပြောဆိုခဲ့သော အောက်လုံးများ
by Hla Soewai - 17 Feb 2022 10:49 AM
ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်များ အကြား အဆင်မသင့်သည့် အခါ နှုတ်မစောင့်စည်း နိုင်တော့ပဲ တဦး နှင့် တဦး မခံချင်အောင် ပြောဆိုလာမှုသည် ယခုမှ မဟုတ်ပဲ ၁၆ ရာစုနှစ် အော်တိုမန် အင်ပါယာ ပြည့်ရှင်မှ အစပျိုးလာခဲ့သည်ဟု အီကော်နော်မစ် မဂ္ဂဇင်းတွင် “Beastly History of Diplomatic...
ရုရှား၏ ငွေမည်းများ အဘယ်ကြောင့် ဗြိတိန်တွင် အမြောက်အများ ရောက်နေရသနည်း
by Hla Soewai - 09 Feb 2022 10:11 AM
ယူကရိန်း ပြဿနာ ဖြစ်လာချိန်မှစ၍ ရုရှား သမ္မတ ပူတင်၊ ကရိုနီ များ နှင့် ၎င်းတို့ နှင့် ဆက်နွယ်နေသော ကုမ္ပဏီများအပေါ် အနောက်နိုင်ငံ များမှ နည်းလမ်းပေါင်းစုံ ဖြင့် ဒဏ်ခတ် အရေးယူသွားမည် ဆိုသော ခြိမ်းချောက်မှု များ ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ဗြိတိန်ကလည်း နိုင်ငံ၏ စီးပွား...
ဘောရစ် ဂျွန်ဆင် ရာထူးမှ နှုတ်ထွက်ပေးရတော့မည်လော
by Hla Soewai - 06 Feb 2022 11:29 AM
ယခုအခါ ဗြိတိသျှ ဝန်ကြီးချူပ် ဘောရစ် ဂျွန်ဆင် အဖို့ သူ၏ ရာထူးအား အကြီးအကျယ် ခြိမ်းခြောက် ခံနေရမှု နှင့် ရင်ဆိုင်နေရပြီ ဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀ မေလ အတွင်း ကိုဗစ် ကူးစက် ကပ်ရောဂါကြီး ဒဏ်ကို ဗြိတိန် နိုင်ငံတဝှမ်း အလူးအလှိမ့် ခံနေရချိန်တွင် ဒေါင်းနင်းလမ်း ဝန်ကြီး...
ယူကရိန်း တဝိုက် ရုရှား၏ စစ်အင်အား တည်ဆောက်မှု မည်မျှထိ ကြီးမားလာနေသနည်း
by Hla Soewai - 02 Feb 2022 02:06 PM
ရုရှား-ယူကရိန်း နယ်ခြားတဝိုက် ဖြစ်ပေါ်လာနေသော အကျပ်အတည်း သည် ပြေလျော့သွားမည့်အလားအလာ မတွေ့ရပေ။ ဇန်နဝါရီ ၂၇ ရက်နေ့တွင် အမေရိကန် သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒင်သည် ယူကရိန်းအား ဖေဖေါ်ဝါရီလ အတွင်း ရုရှားမှ ကျုးကျော် တိုက်ခိုက်လာမည့် အရေးသည် ဖြစ်နိုင်ခြေ နည်းပါးနေကြောင်...
Visitor Counter : 770737